Best Testosterone (Nnwale) ntụ ntụ Nrụpụta factory
AASraw bụ ọkachamara ọkachamara nke anabolic steroid ntụ ntụ na nnyefe nchekwa!
Ntụ ntụ Mbelata ibu
Alfa GPC ntụ ntụ
Noopept (GVS-111) ntụ ntụ
/ngwaahịa/Testosterone ntụ ntụ
AASraw na-enye ụdị testosterone esters ntụ ntụ na-edozi ahụ, anyị nwere ike ibupu anabolic steroid raws n'ụwa nile, karịsịa maka USA, Europe, ọrụ nzigharị na-arụ ọrụ nke ọma na ọ bụ ụdị nnyefe ụlọ, dị oke mma. Na mgbakwunye, enwere ike ịkwado ọtụtụ usoro na ọnụahịa kacha asọmpi.
Kwuo okwu na AASraw Ugbu a
Zụrụ Testosterone ntụ ntụ
Testosterone Cypionate ntụ ntụ
Rịọ maka nkọwa ngwa ngwa
Testosterone Undec ntụ ntụ (5949-44-0) -COA
Testosterone PP ntụ ntụ (1255-49-8) -COA
Nwale Prop ntụ ntụ (57-85-2) -COA
Nwalee E ntụ ntụ (315-37-7) -COA
Nwalee Deca ntụ ntụ (5721-91-5) -COA
Nwale Cyp ntụ ntụ (58-20-8) -COA
Sus 250 ntụ ntụ-COA
Nwalee Iso ntụ ntụ (15262-86-9) -COA
1. Testosterone na akụkọ ihe mere eme ahụ
2. Gịnị bụ Testosterone na kedu ka esi emepụta ya?
3. Gịnị Bụ Healthy Testosterone Levels?
4. Steroid na Testosterone bụ otu ihe ahụ?
5. Ònye chọrọ ọgwụgwọ Testosterone?
6. Gịnị mere ndị na-emepụta ahụ ji ahọrọ Testosterone Injections?
7. Kedu ihe bụ Esters Kachasị Mma nke Injection Testosterone?
8. Kedu ka esi enweta Testosterone Esters kacha mma maka ịrụ ahụ?
Kedu ihe bụ ọrụ dị iche iche Testosterone Esters n'ime ahụ?
Testosterone bụ hormone steroid na-eme n'ime ahụ mmadụ. A na-achọ hormone testosterone maka mmepe physiological nke ahụ nwoke ma nwee ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ, nke mere ka eji ya dị ka steroid nke anabolic site na bodybuilders na ndị na-eme egwuregwu.
( 1 3 )↗
Ebe nchekwa data a na-akwanyere ùgwù nke ukwuu sitere na National Institutes of Health
Gaa na isi iyi
Testosterone bụ hormone steroid na ahụ mmadụ na afọ, ọkwa testosterone n'ime ahụ na-amalite ibelata. Mbelata a na-esonyere ọtụtụ mmetụta dị iche iche, dị ka ntutu isi, mbelata nke ahụ ike, na mbelata n'ozuzu nke uche na ike anụ ahụ. Testosterone steroid hormone dị oké mkpa maka ndị a n'ime ahụ, na nghọta ahụ bụ kpọmkwem ihe kpatara iji exogenous testosterone dị ka ọgwụgwọ testosterone na mbụ.
N'afọ 1899, Dr. Brown-Sequard mepụtara Elixir nke Ndụ maka ụmụ nwoke bụ nke e ji ọbara, semen, na mmiri testicular nke e weere na nkịta na ezi pigs. Nke a nwere ike iyi ihe dị egwu n'ihi ọganihu ahụike nke taa mana laa azụ na 1899, nke a bụ nchọpụta na-agbawa obi. Dr. Brown-Sequard nwalere concoction a n'onwe ya, na-achọpụta ọganihu dị ukwuu na ahụike na ume ya dum. Dị ka okwu nke Dr. Brown-Sequard na-enwe ọganihu na anụmanụ testosterone dabeere na elixir na-agbasa, ọtụtụ ndị dọkịta malitere iji elixir. N'ikpeazụ, ihe karịrị ndị dọkịta 12,000 nyere ya iwu, ya mere, na-emeghe ụzọ maka iji testosterone mee ihe.
Ọ bụ ezie na concoction Dr. Brown-Sequard nwere ihe ịga nke ọma n'ihi mmetụta nke testosterone steroid, ezigbo testosterone synthetic emepụtabeghị ruo 1935, na Germany. Isi ojiji nke testosterone sịntetik a bụ ịgwọ ịda mbà n'obi na nke ahụ bụ ihe ejiri ya mee, ruo n'egwuregwu Olympic nke 1954. A maghị isi ihe na-akpali akpali maka iji eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi ma ọ bụ na 1954 Olympics ka ndị na-eme egwuregwu malitere iji testosterone dị ka steroid nke anabolic, maka ịrụ ọrụ anụ ahụ ka mma.
Ọ bụ ezie na iji testosterone sịntetik eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi malitere na 1954, ọ bụ nanị ndị na-eme egwuregwu ruo 1980 mgbe ojiji nke testosterone dị ka steroid anabolic gbasaa na ọha mmadụ. N'oge a, na ruo n'oge na-adịbeghị anya, iji testosterone bụ ndị nwoke na-abụghị ndị egwuregwu na-emekarị maka ọdịdị ha, kama ịrụ ọrụ anụ ahụ ha. Ndị mmadụ n'ozuzu na-eji testosterone ma ọ bụ steroid na-eme ka uru ahụ ha dịkwuo mma, ma yie ka ọ dị ukwuu ma buru ibu karịa ịrụ ọrụ nke ọma na egwuregwu.
Ndị mmadụ n'ozuzu hụrụ mmụba dị ịrịba ama na arụmọrụ anụ ahụ ha na testosterone exogenous. Ha nwetara uru ahụ ike na-adịghị ala ala ka mma, yana mbelata ahụ mgbu mgbe mgbatị ahụ gasịrị yana oge mgbake zuru oke. Uru ndị a niile mere ka mmụba nke testosterone dị ka steroid nke anabolic site n'aka ndị na-eme egwuregwu na ndị na-arụ ọrụ ahụ.
Ojiji nke testosterone exogenous na-abawanye mere ka Congress na-ebipụta Iwu Anabolic Steroid Act nke 1990 bụ nke chọpụtara anabolic steroid dị ka ọgwụ ọgwụ nke onwe ha ma tinye ha na ndepụta nke ihe ndị a na-achịkwa.
( 1 2 )↗
Testosterone bụ hormone steroid nke a na-ahụ na abụọ, ndị ikom na ndị inyom nwere ọkwa dị elu na ụmụ nwoke, karịa ụmụ nwanyị. Ọ bụ homonụ mmekọahụ nwoke na-ahụ maka mmepe nke njirimara nwoke na nwanyị. Emepụtara nke ọma na testes, a na-emepụta homonụ steroid a site na cholesterol. Isi isi iyi nke testosterone na nwoke na nwanyị dị iche iche dị ka nwanyị na-emekarị na-adabere na adrenal glands na mpụta anụ ahụ maka testosterone njikọ ebe ọ bụ isi synthesized site testes na ndị ikom.
Njikọ nke testosterone, steroid sitere na otu androstane, dabere na cholesterol na ọrụ nke mkpụrụ ndụ Leydig na testes. Ozugbo ejikọtachara ya, a na-ebu ya n'ọbara site na mmekọahụ-hormone-binding globulin (SHBG) ma mgbe ejiri ya mee ihe, a na-ebuga ya na imeju ka ọ bụrụ ihe na-adịghị arụ ọrụ metabolites.
Oke nwoke nwere ahụike kwesịrị inwe ọkwa testosterone n'ogo nke 264 ng/dl ruo 916 ng/dl. Usoro a bụ naanị maka ụmụ nwoke na-abụghị oke ibu na afọ 19 ruo 39 afọ, yana ọkwa testosterone pụtara nkezi na 630 ng/dl. N'ime nke a, nanị 25 pasent bụ n'ezie testosterone na-arụ ọrụ na gburugburu 2 pasent na 3 pasent bụ free testosterone.
A na-atụle Testosterone site na iji usoro Vermeulen gbanwetụrụ, ebe a na-atụle naanị testosterone nke na-ejikọta na SHBG. Ọ na-atụkwa testosterone nke na-adighi ike na albumin n'ime ọbara mana ọ naghị atụ testosterone efu.
Ọ dị mkpa iburu n'obi na nsonye nsonye nke testosterone bụ ndị dọkịta na-arụrịta ụka ogologo oge, na mkpesa ndị bụ isi bụ na njedebe dị ala. Ndị dọkịta kwenyere na 294 ng / dl dị oke ala ma na-ezo aka na hypogonadism ma ọ bụ ọkwa testosterone dị ala, kama ịbụ uru nkịtị. Kama nke ahụ, ha na-atụ aro iji 350 ng/dl dị ka ọnụ ahịa mbelata dị ala iji mee ka ọnụọgụ ntụaka dịkwuo mma. Agbanyeghị, nke a abụghị uru mbelata anabatara nke ukwuu yana mbelata gọọmentị ka na-anọgide na 294 ng/dl n'agbanyeghị na ụfọdụ ụlọ ọgwụ nkeonwe nwere ike were 350 ng/dl dị ka mbelata ha.
Akụkụ ọzọ ị ga-atụle n'ịleba ọkwa testosterone bụ na hormone steroid na-enwe mgbanwe n'ime ụbọchị dum, nke pụtara na ọ ga-abụ na ụkpụrụ ndị a tụrụ n'ụtụtụ ga-adị nnọọ iche karịa ụkpụrụ a tụrụ na mgbede. Ụkpụrụ nke ụtụtụ dị elu karịa ka ọkwa testosterone na-ebelata ụbọchị dum.
Ọkwa testosterone na-adaberekwa na ntọhapụ nke gonadotropin na-ahapụ hormone (GnRH) nke a na-ewepụta n'onwe ya n'ụzọ dị nro, na nkezi, kwa awa ole na ole. Enwere ike ikwu na nke a bụ mgbanwe na ọkwa testosterone n'ime ụbọchị dum.
( 2 5 )↗
Testosterone na steroid abụghị otu ihe ọ bụ ezie na ha nwere otu ikike, ruo n'ókè. Ọ dị mkpa ịbanye n'ime ihe ndị anabolic steroid bụ tupu atụnyere ha na testosterone.
Anabolic-androgenic steroid bụ ihe dị iche iche nke nwere otu mmetụta ahụ dị ka hormone mmekọahụ, testosterone. N'ezie, ha bụ ụdị sịntetik nke testosterone. Ndị steroid anabolic nwere ike ịbụ ma ọ bụ testosterone esters, testosterone precursors, ma ọ bụ ụdị testosterone ndị ọzọ, nyere na ha niile na-arụ ọrụ dị ka homonụ eke.
Ọ dị mkpa iburu n'obi na steroid anabolic dị iche na corticosteroids dị ka prednisone nke a na-eji maka ọgwụgwọ ụfọdụ nsogbu ahụike. Ndị dọkịta na-enyekarị steroid ndị anabolic maka testosterone dị ala, ebe ha na-arụ ọrụ n'otu aka ahụ. Otú ọ dị, a na-ejikarị ụdị steroid ndị a eme ihe na-ezighị ezi site n'aka ndị na-eme egwuregwu na ndị na-arụ ọrụ ahụ iji mee ka ụba ahụ dịkwuo ngwa ngwa.
Ndị steroid anabolic na-ejikọta na androgen receptor na ụbụrụ. Testosterone na-ejikọta ya na onye na-anabata ya na-emekarị ka ọ mepụta mmetụta ya, ya mere, na-akọwa ikike steroid nke anabolic ime ihe n'ụzọ yiri testosterone. Ndị steroid anabolic dị n'ụdị dị iche iche dị ka injections, pill, pellets etinyere, gels, na ude. N'otu aka ahụ, e nwere ọtụtụ ụdị steroid anabolic dị iche iche, nke a na-eji agwọ ọrịa ahụike metụtara obere ọkwa testosterone.
Testosterone bụ homonụ mmekọahụ nwoke nke a na-emepụta n'ime ahụ. The testosterone esters, nke bụ esters nke ma ọ bụ eke testosterone ma ọ bụ sịntetik testosterone bụ ndị a na-ejikarị anabolic steroid maka ọgwụgwọ nke obere testosterone larịị. Ihe atụ nke esters testosterone gụnyere testosterone enanthate, testosterone cypionate, testosterone propionate, testosterone Sustanon 250, testosterone phenylpropionate, testosterone decanoate, testosterone isocaproate, na testosterone undecanoate.
Ihe kpatara eji eji testosterone esters eme ihe dị ka steroid nke anabolic bụ n'ihi na usoro esterification na-eme ka steroid anabolic dịkwuo bioavailable site n'ime ka hormone ahụ na-emepụta ihe na-eguzogide ọgwụ. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, esters ndị a anabolic steroid na-aghọ ụdị prohormone ma ọ bụ pro steroid, nke kwesịrị ịrụ ọrụ n'ime ahụ.
Ebe ọ bụ na a na-enye esters steroid anabolic site na intramuscular injections, ọ dị mkpa iburu n'uche uru ndị sitere na ụdị nnyefe steroid a. A na-ebelata nkwụsị nke Testosterone esters dị ka absorption nke esters na-adịkwa ngwa ngwa. Nke a na-enyere aka ịlụso okwu nke obere ọkara ndụ nke testosterone esters ọgụ. A na-eji esters ndị a eme ihe na ọgwụgwọ ngbanwe nke hormone na maka ọkwa testosterone dị ala, ya mere ọ dị mkpa inwe ogologo ọkara ndụ.
Dị ka otu afọ, ọkwa nke testosterone na-amalite ibelata. Nke a bụ akụkụ nkịtị nke ịka nká maka ụmụ nwoke, ebe enwere mbelata 1 pasent na ọkwa testosterone kwa afọ mgbe afọ 30 gasịrị. Onye ọ bụla karịrị afọ a nwere ike irite uru na ọgwụgwọ testosterone na ndị na-eji testosterone esters injections na-ekwu na ha na-ahụ mmụba dị ịrịba ama na oke muscle, uto muscle, libido, na ahụike uche na nke anụ ahụ.
Testosterone injections nwere ọtụtụ uru ma ọ dị mkpa iburu n'obi na mgbe ị na-ekwurịta isiokwu a, testosterone injections na-ezo aka injections nke testosterone esters. A na-ewere injections ndị a naanị otu ugboro n'izu abụọ ruo anọ, na-eme ka ọ dịkwuo mfe maka ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu na-agbaso ọgwụgwọ testosterone. Ogologo oge ezumike a n'etiti injections ga-ekwe omume n'ihi eziokwu ahụ bụ na intramuscular injections na-ebelata absorption nke testosterone ester n'ime ọbara. Ọzọkwa, esterification usoro na-eme ka synthetic testosterone metabolism na-eguzogide ọgwụ, nke pụtara na ọ ga-eji nwayọọ nwayọọ na-ahapụ na-eji ya. Ihe ndị a niile na-ebute ogologo ndụ ọkara ndụ nke testosterone sịntetik na mkpochapụ nwayọọ nwayọọ.
N'ozuzu, bodybuilders na-eme egwuregwu na-ahọrọ testosterone injections n'ihi na ọtụtụ uru nke hormone na-akọwapụtawo n'okpuru:
(1) Uto akwara
Testosterone na-arụ ọrụ dị ka steroid nke anabolic, nke n'onwe ya pụtara ịmepụta anụ ahụ. N'ihi ya, ndị na-eme egwuregwu na ndị na-arụ ọrụ ahụ na-eji injections testosterone eme ihe n'ọtụtụ ebe maka ike ha na-eme ka uru ahụ dịkwuo elu. Testosterone na-arụkarị ọrụ dị iche iche site n'ịtụgharị na estrogen ma ọ bụ dihydrotestosterone, nke bụ ụdị hormone dị ike karị. Otú ọ dị, uru ndị bodybuilders na-achọ bụ nsonaazụ nke testosterone kpọmkwem na mọzụlụ na abụba.
Testosterone na-akpali sel precursor nke anụ ahụ nke a maara dị ka sel satịlaịtị, ka ọ rụọ ọrụ wee tinye ya n'ime eriri akwara iji mee ka ọnụọgụ ahụ dịkwuo elu ma ọ bụ gbakọta ma mepụta eriri akwara ọhụrụ. N'agbanyeghị usoro a na-agbaso, njedebe njedebe nke mkpali testosterone bụ ụbara anụ ahụ. Nke a bụ otu n'ime isi ihe mere ndị na-eme egwuregwu na ndị na-arụ ọrụ ahụ ji ahọrọ iji injections testosterone.
Testosterone na-abawanye ọnụ ọgụgụ nke androgen receptors na eriri muscle site n'ịbawanye ọnụọgụ nke nuclei na eriri muscle. Nke a na-enye aka karịsịa mgbe ndị na-arụ ọrụ ahụ na-azụ ọzụzụ, n'ihi na ọzụzụ na-eme ka ọ dịkwuo mma nke ndị na-anabata androgen. Site na ọnụ ọgụgụ na-abawanye ụba nke ndị na-anabata ndị na-enwe mmetụta nke testosterone esters, ọ dị mfe maka testosterone iji jikọta eriri anụ ahụ ma rụọ ọrụ na-eme ka ahụ ike.
A maara Testosterone nke ọma dị ka steroid nke anabolic mana ọ bụkwa ihe mgbochi catabolic steroid nke pụtara na ọ bụghị nanị na ọ na-eme ka ọkpụkpụ anụ ahụ dịkwuo elu, ma ọ na-egbochikwa mgbaka akwara site na igbochi ọrụ nke hormones catabolic n'ime ahụ. Nke a gara n'ihu na-akwalite uto akwara na bodybuilders.
(2) Ntachi obi ka mma
Testosterone nwere ikike imeziwanye usoro ọbara site na-akpali akpali ọrụ nke erythropoietin n'ime ahụ. Ihe hormone a na-eme bụ na ọ na-akwalite nhazi mkpụrụ ndụ ọbara, kpọmkwem, mkpụrụ ndụ ọbara uhie. Nke a dị mkpa karịsịa maka ịzụ ndị na-eme egwuregwu na ndị na-arụ ọrụ ahụ n'ihi na ha na-achọ ka ikuku oxygen dịkwuo elu iji kwekọọ mkpa ikuku oxygen nke anụ ahụ chọrọ n'oge mgbatị ahụ. Ka mkpụrụ ndụ ọbara uhie na-ebu oxygen n'ime ọbara ma na-ebuga ya na akwara dị n'akụkụ, mmụba nke mkpụrụ ndụ ọbara uhie n'ihi testosterone bara uru nke ukwuu maka ha.
Ọganihu oxygen na-abawanye na-arụ ọrụ dị ka ntachi obi na-abawanye n'ihi na ọ na-egbochi ike ọgwụgwụ nke anụ ahụ n'oge ma na-enye ndị na-eme egwuregwu ọzụzụ aka ịrụ ọrụ ogologo oge.
(3) Mmụba Ike Anụ ahụ
Ụzọ kachasị mfe nke testosterone na-eme ka ike dịkwuo ike bụ site n'ịba ụba nke anụ ahụ, nke a tụlere n'elu. A kwenyere na usoro a bụ naanị usoro eji eme ihe testosterone injections nke mere ka ahụ ike dịkwuo elu mana ọganihu na-adịbeghị anya na ngalaba ọgwụ achọpụtala na ike anụ ahụ na-eme ka ọ dịkwuo mma site n'omume testosterone na ọkwa calcium.
Mkpụkpọ akwara, ya mere, ike na-adabere na ntọhapụ calcium n'ime cell. Testosterone na-abawanye ntọhapụ nke calcium a, iji meziwanye mkpụkọ akwara, ya mere, na-abawanye ike anụ ahụ. Nke a bara uru karịsịa nye ndị na-ewu ahụ́ ndị nwere mgbatị ahụ na-ebuli ibu buru ibu.
(4) Emelitere mmemme egwuregwu
Testosterone, na ọkwa nkịtị, anaghị enwe mmetụta kpọmkwem na arụmọrụ egwuregwu, ma a chọpụtala na ndị na-eme egwuregwu Olympic nwere ọkwa testosterone dị elu. A hụla ma nwoke ma nwanyị ka ha na-eme nke ọma na ọkwa testosterone na-abawanye na ahụ, ọ bụ ezie na amabeghị usoro ahụ nke ọma.
(5) Na-edobe abụba anụ ahụ na ihe mejupụtara ya
Dị ka testosterone na-eme ozugbo na usoro nhụjuanya nke etiti iji mezie metabolism, ọ bụghị ihe ijuanya ịhụ ụbara abụba na ibu arọ na ndị ikom nwere obere testosterone. Ọzọkwa, ọkwa testosterone dị ala na ụmụ nwoke na-ebutekarị mmefu caloric mbelata na ọnụ ọgụgụ basal metabolism ngwa ngwa n'ihi mmetụta testosterone na sistemu ụjọ nke etiti.
Mmụba hormone testosterone site na injections testosterone na-enyere aka ịhazi nhazi arọ na ọdịnaya abụba belatara n'ime ahụ. Testosterone injections hụ na ibu enwetara bụ isi muscle uka dabere na ọ bụghị anụ ahụ abụba. Nke a na-enyere ndị na-eme egwuregwu na bodybuilders aka ka ha na-eri a nnukwu ego nke calories na mgbe ahụ ọkụ ha dị ka nke ọma, ma na-adịghị enweta muscle ọnwụ kama abụba ọnwụ.
( 1 4 )↗
Ngwunye testosterone na-enwekarị testosterone esters n'ihi uru dị iche iche nke esters nke a kọwara n'elu. Njirimara nhazi nke esters kachasị nke testosterone injection, ma e jiri ya tụnyere ọgwụ testosterone, a kpọtụrụ aha n'okpuru:
Androgen Esta Ezigbo
Ọnọdụ (ndị) Moiet(ies) ụdị ogologoa
Testosterone undecanoate C17β Undecanoic acid Fatty acid nke nwere eriri kwụ ọtọ 11 1.58 0.63
testosterone propionate C17β Propanoic acid Fatty acid nke nwere eriri kwụ ọtọ 3 1.19 0.84
Testosterone phenylpropionate C17β Phenylpropanoic acid Aromatik fatty acid - (~6) 1.46 0.69
Testosterone isocaproate C17β Isohexanoic acid Fatty acid nke alaka-agbụ - (~5) 1.34 0.75
Testosterone isobutyrate C17β Isobutyric acid Aromatik fatty acid - (~3) 1.24 0.80
Testosterone enanthate C17β Heptanoic acid Fatty acid nke nwere eriri kwụ ọtọ 7 1.39 0.72
Testosterone decanoate C17β Decanoic acid Fatty acid nke nwere eriri kwụ ọtọ 10 1.53 0.65
Testosterone cypionate C17β Cyclopentylpropanoic acid Aromatik fatty acid - (~6) 1.43 0.70
Testosterone caproate C17β Hexanoic acid Fatty acid nke nwere eriri kwụ ọtọ 6 1.35 0.75
Testosterone buciclated C17β Bucyclic acide Carboxylic acid aromatic - (~9) 1.58 0.63
A kpọtụrụ aha n'okpuru bụ njirimara kpọmkwem nke testosterone ester ọ bụla na otú ha si arụ ọrụ n'ime ahụ.
Testosterone enanthate A na-ere ya n'okpuru akara aha, delatesteryl na xyosted, ma na-enye ya dị ka ntụtụ intramuscular ma ọ bụ ntụtụ subcutaneous kwa izu anọ. Na United States, ọ bụ ihe nhazi usoro nke III na-achịkwa ma bụrụ nke iwu kwadoro maka iji n'etiti ndị na-ata ahụhụ site na ọkwa testosterone dị ala yana na ụmụ nwoke transgender. Na Canada, otu testosterone ester bụ nhazi oge IV na-achịkwa ihe.
Testosterone enanthate bụ metabolized na imeju ma na-apụ na mmamịrị, na ọkara ndụ nke ụbọchị anọ ruo ụbọchị ise.
Testosterone cypionate bụ testosterone ester nke a na-ejikarị na-ere n'okpuru aha aha depo testosterone. Ọ dị ntakịrị n'akụkụ ọnụ ahịa mgbe a zụrụ ya na aha ika Otú ọ dị, ụdị ọdịdị nke testosterone ester fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ọnụahịa depo testosterone. A na-ejikwa Testosterone cypionate maka ụmụ nwoke nwere ọkwa testosterone dị ala na ndị na-eme egwuregwu na USA na Canada, ọ bụ usoro nhazi oge II na-achịkwa ihe na nhazi oge IV na-achịkwa ihe.
Nyere dị ka ịgba ọgwụ intramuscular naanị, Testosterone cypionate bụ metabolized n'ime imeju ma wepụ ya na ma, mmamịrị na nsị, n'agbanyeghị na mkpokọta mmamịrị nke ester na-adịghị arụ ọrụ metabolites dị elu nke ukwuu. Ọ nwere ọkara ndụ nke ụbọchị 8.
A na-eme ka Testosterone Propionate
A na-ere ya n'okpuru aha ika, testoviron, testosterone propionate bụ testosterone ester nke a na-enye ma ọ bụ site na ntụtụ intramuscular ma ọ bụ site na ụzọ nchịkwa nke buccal. Dị ka esters dị n'elu, Testosterone propionate bụkwa usoro nhazi nke atọ na-achịkwa ihe na-achịkwa usoro IV na USA na Canada, n'otu n'otu.
Ọkara ndụ nke testoviron bụ awa 20, ozugbo metabolized n'ime imeju, testosterone propionate na-apụkarị na mmamịrị kpamkpam.
Sustanon 250 ma ọ bụ Sustanon 100 bụ ịgba ọgwụ intramuscular nke a kwadebere na ngwakọta nke esters testosterone anọ dị iche iche, ya bụ, testosterone phenylpropionate, testosterone decanoate, testosterone isocaproate, na testosterone propionate. Ọ bụ nkwadebe mmanụ 1 ml nke nwere 250 mg nke esters testosterone a kpọtụrụ aha ebe a.
A na-eji Sustanon eme ihe na Great Britain dị ka testosterone nnọchi ma bụrụkwa nke a na-ahọrọkarị site na bodybuilders na ndị na-eme egwuregwu.
A na-ere ya n'okpuru akara aha testolent, testosterone phenylpropionate bụ testosterone ester nke a makwaara dị ka Testosterone phenpropionate na Testosterone hydrocinnamate. Ọ na-abụbu akụkụ nke Sustanon 250 a kpọtụrụ aha n'elu nke ugbu a nwere nanị testosterone isocaproate. A na-ekesa ya na Great Britain na Romania, dị ka ihe na-arụsi ọrụ ike n'ọtụtụ ngwaahịa nke nwekwara esters testosterone ndị ọzọ. Agbanyeghị, a naghị ere ya ma ọ bụ kesaa ya ugbu a, a na-ejikwa ya maka ebumnuche nyocha.
A naghị ere Testosterone decanoate dị ka otu nkwadebe ester testosterone kama ọ bụ akụkụ nke nkwadebe Sustanon tinyere testosterone isocaproate na testosterone phenylpropionate. A na-amụ ester a ugbu a n'ihi ogologo oge ọ na-arụ ọrụ, Otú ọ dị, enweghị ike ime ya dị ka nkwadebe otu ọgwụ na-egbochi mmetụta ya.
A na-ere Testosterone isocaproate n'okpuru aha aha Sustanon 250 ma ọ bụ Sustanon 100. Ọ dị dị ka ntụtụ intramuscular nke a na-emepụta ma na-apụ na mmamịrị.
A na-ere ya n'okpuru aha aha Andriol na Aveed, testosterone undecanoate, ma ọ bụ testosterone undecylate na-ejikarị eme ihe maka ogologo oge nke ime ihe. Nke a testosterone ester nwere ọkara ndụ nke 21 ụbọchị mgbe a kwadebere ya na tii mkpụrụ mmanụ na roughly 33 ụbọchị mgbe ejikere mmanụ castor. Testosterone undecanoate bụ nke nwere ọkara ndụ kachasị ogologo, nke testosterone esters niile na testosterone decanoate na-abata na ebe nke abụọ.
Testosterone undecanoate bụ usoro nhazi usoro III na-achịkwa ihe na-achịkwa oge IV na United States of America na Canada, n'otu n'otu. A na-enye ya dị ka ịgba ọgwụ intramuscular, imeju na-emezi ngwaahịa ahụ wee pụta na mmamịrị. N'ihi ogologo ndụ ọkara na nchịkwa nchịkwa nke 1000 mg, a na-enye testosterone undecanoate naanị kwa izu iri na abụọ.
Tupu ị na-ekpebi ihe kacha mma testosterone ester maka bodybuilding, ọ dị mkpa ịghọta ihe esters na-eme na otú ha si arụ ọrụ. Ọzọkwa, ọ dị mkpa iji chọpụta mkpa onwe onye na ole testosterone chọrọ, yana ugboro ole ndị na-arụ ọrụ ahụ na ndị na-eme egwuregwu na-adị njikere ịnweta injections testosterone. Ozugbo emechara ihe ndị a niile, ọchụchọ maka ester testosterone kacha mma nwere ike ịmalite.
Testosterone propionate bụ ihe kacha akwụ ụgwọ na-arụ ọrụ nke ọma na testosterone ester yana sustanon. A na-ahụkarị ndị na-ewu ahụ ka ha tụkwasị obi ma ṅụọ iyi site na esters abụọ a testosterone. N'ezie, a na-ewere abụọ ndị a dị ka testosterone kacha mma maka ịmepụta ahụ, nke a na-agbanwe agbanwe dabere na mkpa na njikere nke onye na-arụ ọrụ ahụ.
( 3 5 )↗
Maka ozi ndị ọzọ, a raw onye na-eweta steroid enwere ike ịkpọtụrụ ya ka o wee ghọta nke ga-adabara gị na ndị kacha ewu ewu, na ihe kpatara ya. Ọ bụrụ na testosterone injections abụghị ihe ị dị njikere ime, ụdị ndị ọzọ nke testosterone dị ka ọgwụ testosterone na raw testosterone ntụ ntụ n'ime ha nwere ike rie kwa.
1.Gịnị mere ị ga-eji tụlee testosterone booster powders?
Dị ka e kwuru n'elu, ọkwa nke hormone na-adaba ka afọ na-aga n'ihu. N'agbata afọ 20 na 25 bụ mgbe ọkwa dị elu. Ka ị na-abanye n'etiti afọ iri atọ, ọkwa hormone gị ji nwayọọ nwayọọ malite ibelata. Iweda ọkwa testosterone na afọ bụ usoro nkịtị. Ka o sina dị, ihe na-eme bụ na a na-emetụta ọrụ dị iche iche nke ahụ nke homonụ na-akwado.
Ị ga-achọpụta na ịbelata ibu na-esi ike n'agbanyeghị na-arụ ọrụ; mmekọ nwoke na nwanyị adịghị mma dị ka ọ dị na mbụ, na mmepe akwara na-emetụta. Ọzọkwa, uto akwara na-ebelata nke ukwuu. Mana ịkwesighi ichegbu onwe gị. Enwere ngwọta okike, n'ụdị ihe mgbakwunye nri, nke dị na ahịa. Testosterone booster powders nke a na-eme site na ihe ndị sitere n'okike kwesịrị inye ohere dị ka ọtụtụ ndị mmadụ na-erite uru na mgbakwunye ndị a na-enweghị mmetụta ọjọọ ọ bụla.
Buru n'uche na emebere ihe mgbakwunye ndị a iji kwalite ọkwa onye nọ n'afọ 60 ka ya na nwata ha nọ n'afọ 20. Emepụtara ha iji bulie ọkwa dị elu, yabụ ahụ na-arụ ọrụ niile achọrọ nke dabere na ọkwa homonụ na nsonaazụ kacha mma.
2.What bụ uru nke na-ewere a testosterone booster?
Testosterone boosters bụ n'ozuzu eke Mmeju na-amụba testosterone na testosterone metụtara gị ahu. Ụfọdụ testosterone boosters na-arụkwa ọrụ site na igbochi estrogen, hormone mmekọahụ nke nwanyị.
♦ Maka ndị ọrịa na-ata ahụhụ site na hypogonadism (mgbe glands mmekọahụ na-emepụta ntakịrị ma ọ bụ enweghị homonụ mmekọahụ), ndị na-akwalite testosterone nwere ike ime ka ụwa ha dị ike site n'ime ka ha nwee ume na elu.
♦ Ụfọdụ ndị ikom na-eme ihe nyocha ule nwere ike ịhụ mgbanwe dị mma na ọnọdụ ha, ụba anụ ahụ, ọkpụkpụ ọkpụkpụ, na agụụ mmekọahụ.
♦ Ọzọkwa, testosterone boosters nwere ike inye aka na nsogbu ndị metụtara erectile dysfunction na nwere ike ime ka ha nọrọ ogologo oge n'ihe ndina.
♦ A kwenyere na ihe mgbakwunye Testosterone na-ebelata ohere nke ọrịa obi na ọrịa dementia. Otú ọ dị, ndị na-enwekarị ọrịa obi na ọrịa strok kwesịrị ịkpachara anya tupu ha amalite ịkwalite testosterone ụdị ọ bụla. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu obi mana ọ dị mkpa ka testosterone booster dị mkpa, kpọtụrụ dọkịta gị tupu ịmalite ọgwụgwọ ọ bụla.
3.Gịnị mere ọtụtụ bodybuilders na-ahọrọ ịzụta steroid testosterone enanthate ntụ ntụ?
Anabolic steroids testosterone enanthate ntụ ntụ bụ isi na-eji bodybuilders, ndị na-eme egwuregwu, na ahụ ike "buffs" ndị na-azọrọ na steroid na-enye ha uru asọmpi na / ma ọ bụ meziwanye arụmọrụ ha. A na-ekwu na steroid na-abawanye oke ahụ, ike na ike ike. A na-ekwenyekwa na Testosterone enanthate ntụ ntụ na-ebelata oge mgbake n'etiti mgbatị ahụ, nke na-eme ka o kwe omume ịzụ ọzụzụ siri ike ma si otú a na-emewanye ike na ntachi obi. Ụfọdụ ndị na-abụghị ndị na-eme egwuregwu na-agbanyekwa testosterone enanthate mmanụ iji mee ka ntachi obi ha dịkwuo elu, oke ahụ na ike ha, ma belata abụba anụ ahụ nke ha kwenyere na ọ na-eme ka ọdịdị onwe onye dịkwuo mma. Ya mere, testosterone enanthate ntụ ntụ maka ire ere bụ ihe nkịtị na ahịa, Ebe e nwere ndị na-azụ ahịa, e nwere ndị na-ere ahịa. AASraw na-enye ezigbo ule e ntụ ntụ na ntụ ntụ testosterone ndị ọzọ na China.
4.Ọ bụ testosterone ntụ ntụ iwu na-akwadoghị?
Ọnọdụ iwu nke testosterone ntụ ntụ ga-adabere na iwu obodo yana ma ọ bụ ọgwụ ndenye ọgwụ ma ọ bụ na ọ bụghị. Na United States, Testosterone ntụ ntụ bụ usoro nhazi nke III na-achịkwa ihe, nke pụtara na ị nweghị ike ịnweta steroid anabolic a na-enweghị akwụkwọ ndenye ọgwụ n'aka dọkịta gị.
Ị nwere ike ịzụta testosterone ntụ ntụ n'elu counter ma nke a ga-adabere na iwu nke obodo gị. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịzụta Testosterone ntụ ntụ n'elu counter na Mexico na-enweghị ndenye ọgwụ ma ọ bụ iwu megidere iwu iji weta testosterone propionate na United States.
5.How to homebrew testosterone mmanụ nzọụkwụ site nzọụkwụ? (Testosterone enanthate mmanụ dị ka ihe atụ)
Maka ọtụtụ ndị mmadụ, ha na-ahọrọ ime mmanụ testosterone n'onwe ha, ọ dị nnọọ mfe usoro na anyị nwere ike mechaa, ọ bụrụhaala na ị dị njikere niile ngwá ọrụ na ntụziaka, n'ihi na ọtụtụ steroid raws nwere yiri usoro ime okokụre mmanụ maka injection. Ka anyị mee ya ugbu a. Maka ihe atụ a, m ga-eji testosterone enanthate naanị.
M ga-eme 10 karama testosterone enanthate na 10ml kwa karama. Nke ahụ bụ mkpokọta 100ml ihe na anyị ga-eme ya 250mg / ml
Maka nke a, anyị ga-eji ogo BA / BB nke 2/18, nke pụtara 2% ba na 18% bb, ị nweghị "nwere" inwe bb na nke a mana ọ na-enyere aka belata ngwakọta ahụ ma na-enye gị ohere iji obere ihe. ba, na-eme ka ogbugba ahụ ghara mgbu ma ị nwere ike ịgbago 400mg / ml ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ
1) Tinye mgbanwe niile na mgbako roid,
N'ebe a, ị ga-etinye mmanụ ml = 100ml
Usoro onunu ogwu ga-abụ 250 mg / ml
Hapụ ntụ ntụ ntụ na .75, nke a na-arụ ọrụ nke ọma maka ọtụtụ ihe niile
Ba, nkwụnye .02(2%)
BB, nkwụnye .18(18%)
Nke a ga-enye gị ihe ndị a dịka mgbako si dị
-61.25ml mmanụ na-adịghị mma (ọkacha mmasị m)
-25.00 grams nke enanthate ntụ ntụ
-2 ml nke BA
-18 ml nke BB
2) Jiri beaker 500ml wee kpochaa ya dịka o kwere mee, ọ bụghị nnukwu ego ka anyị ga-enyocha ihe anyị dọpụtara na ya. Were gram 25.00 nke enanthate ntụ ntụ ma tinye na beaker.
3) tinye 2ml nke BA na 18ml nke BB n'ebe ahụ, a na-eji sirinji 10 ma ọ bụ 20cc tụọ nke a ngwa ngwa. Ọ ga-adị ka a ga-asị na nke a ezughị iji gbarie ntụ ntụ niile, mana ọ ga-eme.
4) tinye ite frying n'elu stovu n'ogo ọkụ 3 ma ọ bụ karịa, ọ na-amasị m itinye mmiri n'ime ite ahụ. Ọzọ tinye beaker na ba / bb / ntụ ntụ na pan ma mee ka mmiri / pan ahụ kpoo beaker ahụ. Ị ga-ahụ ntụ ntụ na-amalite "agbaze" ma ọ bụ gbazee na ọ ga-eme ka ngwọta doro anya. Ị nwere ike iji mkpanaka iko kpalie ma mee ka usoro a dị ngwa
5) Mgbe ba / bb gbazere ntụ ntụ, Ugbu a, wụsa na 61.25ml nke mmanụ na-adịghị mma ma hapụ okpomọkụ na-emegharị na mkpanaka iko maka nkeji ole na ole, ị ga-enwe ngwakọta doro anya mara mma.
6) ọzọ ọ na-amasị m ịgbanye ọkụ na 1 ma ọ bụ karịa ka ngwakọta ahụ wee kpoo ọkụ……nyocha ngwakọta mgbe ọ na-ekpo ọkụ dị mfe karịa mgbe okpomọkụ ụlọ ya.
Tinye agịga ọhụrụ 18g gị site na ihe nkwụsị rọba na n'ime karama 100ml nke na-adịghị mma. Tinye .45 whatman filter n'elu agịga dị ka ọ dị na ntụgharị fina.
7) Jiri sirinji 10ml wepụ mmanụ na-ekpo ọkụ, gbanye mmanụ ahụ n'ime ihe nzacha whatman na n'ime vial iko na-adịghị ọcha. Ka sirinji ị na-eji buru ibu ka ọ na-esiwanye ike ịkwanye mmanụ ahụ n'ebe ahụ. M na-ejikarị sirinji 30ml na-ewepụta mmanụ site na beaker wee laghachi azụ jupụta sirinji 10ml wee jiri sirinji 10ml gbanye ya dị ka ihe ọjọọ ya dị nso na-agaghị ekwe omume iji 30ml mee ya.
8) Mgbe emechara ya niile, ị ga-enwe 100ml na 250mg/ml nke steroid injectable siri ike yana nchekwa. Ụfọdụ na-enwe mmasị ime achịcha ka sterilize ọbụna n'ihu n'oge a mana m maka otu ahụghị m na ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ndị na-adịghị mma. Akpọrọ m ọtụtụ narị cc n'ụzọ nkịtị na enwebeghịkwa nsogbu ịmụ nwa, ba na-arụ ọrụ ya n'ime ka ọ ghara ịdị ọcha!
9) Ugbu a, ị nwere ike iwepụta 10ccs n'otu oge wee jupụta karama 10ml n'otu n'otu iji mee karama iri.
Nke a bụ usoro zuru oke iji mee mmanụ agwụla, ekwenyere m na a zara ọtụtụ ajụjụ mgbe agụchara nzọụkwụ a. esi mee ka testosterone propionate si ntụ ntụ? esi atụgharị testosterone ntụ ntụ n'ime mgbanwe mmanụ? Nwalee mmanụ prop na nwalee mmanụ cyp, ọbụlagodi mmanụ 250, usoro mmanụ homebrew ha yiri, naanị uzommeputa dị iche. Maka uzommeputa, ịkwesịrị ịgwa ndị ahịa anyị okwu mgbe ị na-enye iwu, ha ga-agbalị ịnye ozi ịchọrọ ịma.
6.What bụ sustanon 250 ntụ ntụ mebere?
Sustanon 250 bụ ngwakọta testosterone na-ewu ewu (ngwakọta) na enweghị ajụjụ ọ bụla ngwakọta kachasị ewu ewu na nke a maara nke ọma mere. Emepụtara Organon, echiche dị n'azụ Sustanon 250 bụ inye ihe kacha mma nke obere (obere) na nnukwu (ogologo) ester testosterones n'otu ogige. Nke a ga-ekwe ka onye ahụ nọgide na-enwe ike ịnọgide na-enwe ọkwa ọbara kwụsiri ike nke hormone testosterone na usoro ịgba ọgwụ na-adịghị adịkarị mgbe ọ na-enweta uru ngwa ngwa ngwa ngwa. Enwere esters anọ nke mejupụtara ngwakọta sustanon 250:
testosterone p30 mgs: N'ime 250 mgs nke mejupụtara ogige a, naanị 30mg (12%) bụ ester propionate dị mkpụmkpụ; N'ihi ya, Sustanon 250 ekwesịghị ka a na-emeso ya dị ka propionate. Ọtụtụ mgbe, ndị na-achọ ester dị mkpụmkpụ na-eji propionate ester na okirikiri nke naanị izu 8 ma ọ bụ ihe na-erughị ya, nke kwesịrị ịgbanye ya kwa ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị ọ bụla. Ọkara ndụ bụ naanị ụbọchị 3.5, yabụ ọ na-abanye na sistemụ ngwa ngwa karịa esters ndị ọzọ. N'ezie, ọtụtụ bodybuilders na-ekwukwa na ha na-enweta obere aromatization si propionate, nke nwere ike inwe ihe jikọrọ ya na eziokwu na ọ dịghị anọ na usoro ogologo oge.
testosterone phenylpropionate 60 mgs: Ester a bụ nke abụọ kacha mkpụmkpụ nke ngwakọta, a na-ahụkarị ya na Nandrolone Phenylpropionate (NPP). Ọ nwere ndụ ọkara nke naanị ụbọchị 4.5, yabụ ka propionate na-agbada nwayọ nwayọ, ị nwere ike ịtụ anya ka phenylpropionate nọrọ ebe ahụ wee nye nkwalite tupu esters ogologo amalite ịmalite.
testosterone isocaproate 60 mg: Nke a bụ ester nke atọ kachasị nke nwere ndepụta ọkara ndụ nke ụbọchị 9, nke dị nso na enanthate ester, ebe ọ nwere ụbọchị 10.5 ọkara ndụ.
testosterone decanoate 100 mgs: Ester a dị ogologo na-ejide akụkụ bụ isi nke ihe na-arụ ọrụ na sustanon, na-eme 100 mgs n'ime mkpokọta 250 mgs. Ọkara ndụ nke ester a bụ ọmarịcha ụbọchị iri na ise.
Testosterone sustanon ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ dịka ọmụmaatụ:
Testosterone Sustanon 250mg/ml @ 100ml uzommeputa nri:
Testosterone ngwakọta ntụ ntụ 25g (18.75ml)
59.25ml mmanụ ọka
7. Kedu testosterone ka mma Testosterone Sustanon 250 ntụ ntụ ma ọ bụ enanthate ntụ ntụ?
Mgbe a bịara n'ịtụle Sustanon 250 ntụ ntụ na Testosterone Enanthate ntụ ntụ, isi ihe dị iche na-adabere na ogologo ester.
Sustanon 250 ntụ ntụ, ịbụ ngwakọta nke Testosterone dị ogologo oge, na-ewe ntakịrị oge iji "ịkụba" mana enwere ike nweta uru sitere na ngwakọta anabolic a na obere injections ugboro ugboro. Testosterone Enanthate, n'aka nke ọzọ, achọrọ ka a na-elekọta ya kwa izu n'ihi esters dị mkpụmkpụ ọ bụ ezie na mmetụta ya dị ngwa ngwa karịa Sustanon.
Testosterone enanthate ntụ ntụ, mgbe a na-eji cycles nke 10-12 izu, bụ ezigbo steroid dị ka ọ dị mfe maka ndị na-eme egwuregwu iji chọpụta ma jikwaa ọkwa testosterone. Otú ọ dị, uru a nwere ike ịla n'iyi mgbe ogologo oge nke usoro ahụ bụ 4-6 izu ka mmetụta nke steroid ga-amalite igosi mgbe izu 2-4 gasịrị. N'ihi esters agwakọta, Sustanon bụ steroid siri ike ịnagide mgbe ọ na-abịa na njikwa nke ọma nke ọkwa ọbara.
Otú ọ dị, Testosterone enanthate ntụ ntụ kwenyere na ọ ga-adị mfe karịa Sustanon mgbe ọ na-abịa na njikwa mmetụta estrogenic. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na ọkwa ọbara testosterone na-emekarị ka ọ dị ngwa ngwa na Testosterone enanthate ojiji na nke a pụtakwara na mmetụta ndị na-adịghị egosi n'oge. Nhọrọ n'etiti Sustanon 250 ntụ ntụ na Testosterone Enanthate ntụ ntụ na-adabere na atụmanya sitere na okirikiri steroid na ahụmahụ gara aga (ọ bụrụ na ọ bụla).
8.Nnwale E ntụ ntụ Vs. Nwalee C ntụ ntụ
▪ Nnwale E ntụ ntụ na Nnwale C ntụ ntụ bụ ụdị abụọ nke esterified testosterone variants.
▪ Ebumnuche bụ isi nke testosterone esterification bụ iji mekwuo ọgwụ na ọgwụ na-abụghị nke ọgwụ.
▪ Ya mere, ụdịdị abụọ a bara uru karị ma bụrụ ndị a pụrụ iji mee ihe.
▪ Ha amụbaala ọkara ndụ.
Ha bụ androgens nwere mmetụta nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-akwalite testosterone.
▪ Ha abụọ dị mkpa na nkà mmụta ọgwụ na ahụ mmadụ iji mee ka ọkwa testosterone dị ala.
▪ Enwere ike ịgbanye ha site n'ịgbanye ha.
▪ Ha abụọ na-ewu ewu n'ihi mmụba nke ọkara ndụ na ogologo ogologo windo ntọhapụ nke na-enyere aka ịme usoro ịgba ọgwụ na nchịkwa dị mma karị.
Nyocha E ntụ ntụ ma ọ bụ Testosterone Enanthate ntụ ntụ na-ezo aka na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha ọcha crystalline ester C26H40O3 nke testosterone nke a na-eji karịsịa na ọgwụgwọ eunuchism, eunuchoidism, androgen deficiency after castration, ihe mgbaàmà nke andropause, na oligospermia mgbe Nnwale C ntụ ntụ ma ọ bụ Testosterone Cypionate ntụ ntụ na-ezo aka. na mmanụ-soluble 17 (beta) -cyclopentylpropionate ester nke androgenic hormone testosterone eji tumadi na ọgwụgwọ nke obere testosterone etoju na ụmụ nwoke. Ya mere, nke a na-akọwa isi ihe dị iche n'etiti Test E ntụ ntụ na Test C ntụ ntụ. Ọzọkwa, ihe ọzọ dị iche n'etiti Test E ntụ ntụ na Test C powderis nke na-anwale E ntụ ntụ nwere mmalite zuru ụwa ọnụ mgbe Test C bụ ngwaahịa America.
Ọkara ndụ bụ isi ihe dị iche n'etiti Test E ntụ ntụ na Test C ntụ ntụ. Nke ọkara ndụ Test E bụ ụbọchị 10.5 ka ọkara ndụ nke Test C bụ ụbọchị 12. Ụdị usoro ọgwụgwọ nke Test E bụ 100 ka 600 mg kwa izu maka izu 10 ruo 12 mgbe usoro nyocha nke C bụ 400 na 500 mg kwa izu maka izu iri na abụọ. .Ọzọkwa, a ga-agba ule E ugboro ugboro karịa Ule C. Popularity bụkwa ihe dị iche n'etiti Ule E na Nnwale C. Ule E na-ewu ewu ebe C na-atụnyere obere ewu ewu.
Nyocha E ntụ ntụ ma ọ bụ Testosterone Enanthate bụ ụdị esterified testosterone variant na ọkara ndụ nke 10.5 ụbọchị. Ọ bụ ester 7-carbon nwere mmalite zuru ụwa ọnụ. N'aka nke ọzọ, Test C bụ ụdị esterified testosterone variant na ọkara ndụ nke 12 ụbọchị. Ọzọkwa, ọ bụ ester 8-carbon nke sitere na America. Otú ọ dị, n'ihi obere ndụ ọkara ndụ, a ghaghị ịgbanye ule E ugboro ugboro karịa Ule C ntụ ntụ. Ya mere, isi ihe dị iche n'etiti Test E na Test C bụ ogologo oge onye ọrụ kwesịrị ịgba ọsọ nke ọ bụla maka mmetụta kachasị, yana ịgbanye ugboro ugboro dabere na ester.
9. Kedu ka esi amalite usoro testosterone propionate?
Ọtụtụ ndị na-ajụ ajụjụ bụ́ ma mkpirisi mkpirisi ọ̀ kaara uru ma ọ bụ na ọ baghị uru. Azịza ya bụ na ha bụ, dị ka ogologo oge anabolic steroid cycles na-eweta okwu nke HPTA siri ike karị (Hypothalamic Pituitary Testicular Axis) suppression na mechie, na-ebute oge mgbake siri ike karị n'ime izu ole na ole. Ọtụtụ oge na obere okirikiri, HPTA adịghị, n'okwu ndị nkịtị, "na-ejide" ngwa ngwa na homonụ ndị dịpụrụ adịpụ. Nke a bụ ya mere ọtụtụ ndị ga-eji na-anụ ụtọ mkpirisi mkpirisi dị ka usoro izu asatọ - onye ahụ ga-enwe ike ịbanye na okirikiri ngwa ngwa, na-enweta uru ha ngwa ngwa, ma pụọ ​​​​na okirikiri wee banye PCT (Post Cycle Therapy) tupu ahụ amalite ịmalite ịka njọ. Mbelata ma ọ bụ mechie HPTA. N'ezie, onye ọ bụla nwere mmetụta pụrụ iche nke onwe ya na mmechi HPTA (ụfọdụ na-emechi nwayọ karịa ndị ọzọ, ụfọdụ ngwa ngwa karịa ndị ọzọ, ụfọdụ anaghị emechi ma ọlị). Ma dị ka echiche n'ozuzu nke ọtụtụ ndị na-enwe mmasị na Testosterone Propionate cycles bụ na obere oge cycles ka mma maka ihe ndị a.
❶ Onye mbido Testosterone Propionate Cycle
Onye mbido Testosterone Propionate Cycle Example (ngụkọta oge okirikiri izu 10)
Testosterone Propionate na 75-125mg kwa ụbọchị ọ bụla (300-500mg / izu)
Nke a bụ okirikiri mmalite mmalite nke kachasị mkpa, yana nke kachasị mfe nke usoro cycles Testosterone Propionate maka ndị mbido. Ọ bụ mmeghe zuru oke na steroid anabolic n'ozuzu maka onye ọ bụla bịara ọhụrụ na ụwa nke anabolic steroid iji.
❷ Oge etiti Testosterone Propionate Cycle
Ihe Nlereanya okirikiri Testosterone Propionate (ngụkọta oge okirikiri izu 10)
Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin) na 400mg / izu
Izu 1-4: Dianabol na 25mg / ụbọchị
Ihe atụ zuru oke nke okirikiri nke onye ọ bụla ga-eji obere steroid anabolic eme ihe, dị ka Testosterone Propionate, nke nwere steroid anabolic na-eme ogologo oge dị ka Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin). N'ụzọ doro anya, onye ọ bụla ga-enyefe Testosterone Propionate ụbọchị ọ bụla, ebe Deca Durabolin ga-enye ya ugboro abụọ kwa izu kwa izu (Monday na Thursday, dịka ọmụmaatụ). Onye ọ bụla na-etinye aka na ụdị nke Testosterone Propionate okirikiri ga-ahazi oge na oge Nandrolone Decanoate injections iji kwekọọ na ihe dị iche iche Testosterone Propionate injections. Nke a bụ ikwu na, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na usoro ịgba ọgwụ Testosterone Propionate na-adaba na ụbọchị ndị na-esote Tuesday, Thursday, Saturday, Monday, Wednesday mgbe ahụ Nandrolone Decanoate ga-edozi na Tuesday na Monday nke nhazi nchịkwa ahụ.
❸ Ogologo Testosterone Propionate Cycle
Ọmụmaatụ Testosterone Propionate Cycle dị elu (oge okirikiri izu asatọ)
Testosterone Propionate na 25mg kwa ụbọchị ọ bụla (100mg / izu)
Tren Acetate na 100mg kwa ụbọchị ọ bụla (400mg / izu)
Otu ihe atụ na-ahụkarị na nke dị oke mkpa nke usoro cycles Testosterone Propionate dị elu, usoro a bụ nke a na-egosipụta iji Testosterone Propionate dị ka ihe na-akwado nkwado nke a na-eji na TRT doses naanị maka nzube nke ịnọgide na-arụ ọrụ physiological nkịtị na-enweghị ọrụ mmepụta Testosterone na-arụ ọrụ. a na-ebelata ya n'ihi ojiji nke anabolic steroid).
10.Ugboro ole ka m na-agbanye cypionate ule?
Ọ dabere na ọkara ndụ nke ester nke testosterone ị na-agbanye.
Testosterone propionoate - kwa ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị abụọ ọ bụla (na-akwado kwa ụbọchị)
Testosterone enanthate / cypionate / sustanon - Otu ugboro n'izu zuru oke, ị nwere ike ịrụ ụka na-eme nke ahụ kwa ụbọchị 10. Ndị dọkịta mgbe ụfọdụ na-enye nke a kwa izu abụọ, nke bụ mmejọ.
Testosterone decanoate na undecanoate - Ejila ndị esters shitty, ha adịghị mma maka ịrụ ọrụ egwuregwu ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ. Ị na-enweta otu nnukwu agịga inyinya kwa izu isii ma ọ bụ karịa.
Ọ bụrụ na ị na-enyefe injections gị nke ukwuu, ị ga-enweta akụkụ nke oge na obere T na akụkụ nke oge na-enwe oke elu T. Ya mere ị ga-enwe mgbanwe ọnọdụ ọnọdụ dị egwu, na ịda mbà n'obi / whiny kwupụta ụbọchị ikpeazụ nke ogbugba gị.
11.Olee otú ịgbanye Test e/cyp/prop/sus 250?
A ghaghị ịgbanye ya n'ime akwara buttock. E kwesịghị ịgbanye ya n'ime akwara. Soro usoro onunu ogwu ziri ezi dịka okirikiri ị na-eso. Ịbanye ule e ma ọ bụ ule cyp bụ n'ezie usoro dị mfe ozugbo ị jiri nduzi mee ya ugboro ole na ole. A na-enye Testosterone prop/cyp / E naanị site na injection, nke bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ụzọ kachasị dị irè isi nweta testosterone n'ime ahụ gị. Site na ogwu ogbugba, ị nwere ike hụ na testosterone gị na-eme ka ọ dịkwuo ngwa ngwa ma mee ka ọ dịrị gị mfe imeri mmetụta ndị dị na testosterone dị ala.
12.Ole testosterone cypionate onunu ogwu maka bulking ma ọ bụ ịcha?
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịbawanye ụba ma nweta uru ahụ siri ike, mgbe ahụ, ị ​​​​kwesịrị ịgbanye 200-600 mg nke steroid kwa izu na ọ dịkarịa ala injections 2-3. Ọtụtụ ndị ọrụ na-agbasakarị injections ndị a, dịka ọmụmaatụ 100 mg kwa injection n'ụbọchị otu na abụọ, mgbe ahụ, 200 mg kwa ụbọchị ọ bụla n'ime izu na-abịa.
Ọ bụrụ na ị na-agbalị ịkwụsị abụba ma melite nkọwa ahụ gị, mgbe ahụ ị nwere ike belata na Testosterone Cypionate doseji nke ukwuu. Kama ịrapara n'ahụ kwa izu nke 200-600mg, gbalịa iji 100-200 mg kwa izu. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji steroid maka ebumnuche abụọ ahụ, malite na 200 mg kwa ụbọchị ruo mgbe ị ga-eru izu 6, wee gbalịa ịlaghachi na 100mg kwa ụbọchị.
13.Can inyom igba testosterone? Kedu maka okirikiri ahụ?
Ụmụ nwanyị ndị na-achọ imeziwanye arụmọrụ anụ ahụ na nke ịchọ mma anaghị atụ egwu ohere nke ịmepụta mgbaàmà na-adịghị mma. Maka ndị na-eme egwuregwu, a na-atụ aro okirikiri solo nke testosterone enanthate, nke na-ekwesịghị ịdịru karịa izu 8. A na-enye steroid nke anabolic na dose nke 250mg otu ugboro n'izu. Maka okirikiri dum, 8 ampoules nke ọgwụ ahụ ga-adị mkpa. Ọgwụgwọ usoro okirikiri maka ụmụ nwanyị kwesịrị ịdịru ma ọ dịkarịa ala ụbọchị iri abụọ na otu. Ị nwere ike ịmegharị testosterone n'oge na-adịghị anya karịa mgbe ọnwa 21 gasịrị, naanị mgbe ị gachara dọkịta ma mee ule kwesịrị ekwesị. E nwere ụfọdụ ụmụ nwanyị ga-ahọrọ maka stack steroid nke na-agụnye ihe karịrị Testosterone Enanthate. Ụmụ nwanyị na-ahọrọkarị Anavar, Primobolan ma ọ bụ Masteron iji kpokọta n'akụkụ ule. Họrọ ihe ga-abara gị uru!
14. Ogologo oge ole ka ọ na-ewe ule propionate na-arụ ọrụ?
Ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ site na testosterone dị ala na mmetụta ndị na-eso ya, ị nwere ike ịmasị mmasị ịhụ nsonaazụ nke ọgwụgwọ injection propionate testosterone. Nke ahụ bụ ihe kwere nghọta, ebe ọ bụ na imekọ ihe na testosterone dị ala anaghị abụkarị ihe dị mfe. Ọ bụrụ na ị na-eche maka ngwa ngwa nke testosterone propionate injections ga-ewe iji banye, ọ bụghị naanị gị. Onye ọ bụla chọrọ ịma ngwa ngwa ha nwere ike ịtụ anya nsonaazụ site na ọgwụgwọ injection ha.
Na testosterone propionate injections, oge nzaghachi nke ahụ gị nwere ike ịdịgasị iche dabere n'ọtụtụ ihe. Nke a nwere ike ịgụnye afọ gị yana ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ị nwere ike ịtụ anya injections propionate testosterone gị ịmalite ịmalite n'ime ihe dị ka izu 3. Otú ọ dị, ndidi bụ isi mgbe ị na-eji testosterone injections dị ka usoro ọgwụgwọ maka obere testosterone. Testosterone propionate injections nwere ike were ruo 6 izu iji malite ịmalite. Biko lelee ibe usoro iheomume TRT anyị maka ozi ndị ọzọ gbasara ihe ị ga-atụ anya na ntụtụ testosterone.
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ngwa ngwa nke injections testosterone gị na-adị ma ọ bụ na-adịghị emetụta ọnọdụ gị, mgbe ahụ, ị ​​ga-agakwuru ọkachamara ahụike gị ka ị jụọ maka mkpa mgbanwe maka usoro gị na ugboro ole.
15.What bụ testosterone enanthate pụta tupu na mgbe?
Mgbe izu abụọ gachara Enweghị nnukwu mgbanwe ma ọ bụ rịzọlt a kọrọ.
Mgbe otu ọnwa gachara Uru akwara na usoro ọkụ abụba gaara amalite n'ọnwa mbụ.
Mgbe ọnwa abụọ gachara Enwere ike ịhụ uru akwara mgbe ọnwa abụọ gachara yana mmetụta ndị ọzọ na-esokwa maka ọtụtụ ndị ọrụ.
Mgbe ọnwa atọ gachara N'ime izu iri na abụọ ị kwesịrị ị na-akwụsị ọgwụ a maka oge nkwụsịtụ. Agbanyeghị, ka ọ na-erule oge a, ị ga-ewulite uru ahụ dị mkpa.
16.Do I need a prescription to buy Testosterone hormone powder?
Ee, ọ bụrụ na ị na-enweta Testosterone hormone ntụ ntụ maka ahụike ahụike, ịchọrọ ndenye ọgwụ. Ọ bụrụ na ị na-eji ya maka ihe ndị na-abụghị ọgwụgwọ, ị nwere ike ịtụ ya site na ahịa ojii online n'ụzọ iwu na-akwadoghị, enwere ọtụtụ steroid testosterone ntụ ntụ suppliers.
17.Enwere ezigbo Testosterone esters powders maka ire ere na China?
Dị ka anyị niile maara, ndị testosterone esters powders, test e powder, test cyp powder, test prop powder, sus 250 ntụ ntụ bụ ndị na-ewu ewu anabolic steroid na ahịa, na a ga-achọta ya ngwa ngwa na ahịa ojii anabolic steroid n'enweghị mgbalị ọ bụla. . a na-arụpụtakwa ha ngwa ngwa nke na a ga-enweta ya maka ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Testosterone Enanthate dị dị ka ma ngwaahịa ọkwa ọgwụ na ọkwa mmadụ, yana ngwaahịa ọkwa n'okpuru ala (UGL) na ahịa. Ndịiche dị iche iche pụtara ìhè ebe a, na njikwa mma bụ isi okwu, na ọkwa testosterone powders na-adịkarị ọnụ karịa maka ihe doro anya.
Mgbe ị na-ekpebi ịzụta ụfọdụ testosterone ntụ ntụ online, ị ga-achọ ịmụtakwu ma chọta ndị ọzọ suppliers, ma e jiri ya tụnyere ha. M ga-echetara gị na ị kwesịrị ị na-elebara anya na àgwà nke raws, ịchọta ezigbo steroid raws supplier bụ ihe dị mkpa na nke ahụ nwere ike. nyere gị aka ịchekwa oge ụfọdụ, nwere ike nweta ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe na azụmahịa ndị ọzọ n'ọdịnihu. AASraw emeela azụmahịa a ruo ọtụtụ afọ ma ị nwere ike ịkọrọ ahịa ha maka nkọwa ndị ọzọ, ma ọ bụ jụọ usoro nlele maka ule na nke mbụ.
18.Olee otú ị na-eche banyere ngwaahịa AASraw?
Tommy (March 4, 2021): Enwere m obi ụtọ n'ezie na m malitere ime solo Testosterone Prop cycles n'ihi na ọ ghọwo otu n'ime steroid kasị mma maka ọganihu muscle ngwa ngwa na ụbara ike. Ihe kachasị mma banyere steroid anabolic a bụ na ọ na-enye m nkwalite na agụụ mmekọahụ na agụụ mmekọahụ.
Michel (Eprel 18, 2021): Azụtara m ule cyp raw ntụ ntụ n'ọnwa gara aga na ihe kachasị mma banyere ya bụ na ọ na-enyere m aka ịbawanye obi ike. Steroid a enyerela m aka inweta uru ahụ ike na-esikwu ike yana imeziwanye arụmọrụ anụ ahụ m na mgbatị ahụ.
Mike (Ọgọst 16, 2020): Ule E ntụ ntụ bụ otu n'ime steroid kacha mma maka ịbelata ibu n'ihi na ọ na-enyere m aka iwepụ oke abụba anụ ahụ. Etufuola m ọtụtụ ibu ka m na-enwetakwa uru ahụ ike mgbe m mere ọtụtụ usoro cycles testosterone propionate.
Jay Cooper (Mee 12,2020): Enwere m ike ibelata pasentị abụba anụ ahụ, ebe m na-agbakwunye oke anụ ahụ siri ike mgbe m gbasasịrị mmanụ Sus 250. Steroid a enyerela m aka imezu ebumnuche ahụike m na mgbatị ahụ n'ihi na ọ na-eme ka ike na ntachi obi dịkwuo elu.
Austin (June 17,2021): Enwere m ekele maka na m na-ahọrọ aasraw wee nweta ezigbo ule e ntụ ntụ mgbe ọ bụ oge mbụ m ịzụta testosterone enanthate ntụ ntụ si China, ọ na-aga nke ọma. Ọ na-amasị m ịme testosterone propionate cycles wee na-eme PCT n'ihi na ọ na-enyere m aka ịnọgide na-enwe ike m ma melite oke akwara m. Steroid a zuru oke maka inweta nha na ike na mgbatị ahụ, ebe ọ na-enyere m aka ịnọgide na-arụ ọrụ anụ ahụ dị egwu.
 Apicella CL, Dreber A, Campbell B, Grey PB, Hoffman M, Obere AC (Nọvemba 2008). "Testosterone na mmasị ihe ize ndụ ego". Evolution na omume mmadụ. 29 (6): 384–90 . doi:10.1016/j.evolhumbehav.2008.07.001.
 Hoskin AW, Ellis L (2015). "Fetal Testosterone na mpụ: Nnwale nke Evolutionary Neuroandrogenic Theory". Criminology. 53 (1): 54–73 . doi: 10.1111/1745-9125.12056.
 Bailey AA, Hurd PL (March 2005). "Mkpịsị aka ogologo (2D: 4D) jikọtara ya na mmegide anụ ahụ n'ime ụmụ nwoke mana ọ bụghị na ụmụ nwanyị." Psychology ndu. 68 (3): 215–22 . doi:10.1016/j.biopsycho.2004.05.001.
 Meinhardt U, Mullis PE (Ọgọst 2002). "Ọrụ dị mkpa nke aromatase / p450arom". Ọmụmụ ihe ọmụmụ na ọgwụ ọmụmụ. 20 (3): 277–84 . doi:10.1055/s-2002-35374. PMID 12428207.
 Waterman MR, Keeney DS (1992). "Gene na-etinye aka na androgen biosynthesis na phenotype nwoke." Nnyocha Hormone. 38 (5–6): 217–21 .
 De Loof A (October 2006). "Ecdysteroids: ndị na-eleghara mmekọahụ steroid nke ụmụ ahụhụ? Ndị nwoke: igbe ojii”. Sayensị ụmụ ahụhụ. 13 (5): 325–338 . doi:10.1111/j.1744-7917.2006.00101.x. S2CID 221810929.
 Guerriero G (2009). "Ndị na-anabata steroid nwoke na nwanyị: evolushọn, ligands, na neurodistribution." Akwụkwọ akụkọ nke New York Academy of Sciences. 1163 (1): 154–68 .
AASraw na-enye ngwaahịa kachasị mma na mbupu nchekwa.Welcome na ịkpọtụrụ anyị n'oge na-adịghị anya!